VAKY TRANO TENY AMPAHIBE : Lasibatra indray ny Karàna, najifa ny entana rehetra tao an-trano
Tokantranona Karàna iray tetsy Ampahibe indray no lasibatry ny asa ratsin’ireo jiolahy ny alarobia hariva lasa teo. 14 avril 2017
Fongana tsy nisy niaingana ireo fitaovana sy entana lavo vidy tao an-trano. Ahiahiana ho tompon’antoka amin’ity raharaha ity ny mpamilin’izy ireo izay mbola tsy hita popoka ka karohin’ny Polisy fatratra amin’izao fotoana izao.
Ny alarobia hariva no niara-niainga tao an-trano ilay Karàna vavy niaraka tamin’ny zanany telo miandahy hamonjy moske eny Ankorondrano. Tahaka ny efa fanaon’izy ireo dia misy mpamily hatrany miaraka aminy saingy ity farany tsy miditra any am-piangonana fa miandry eo ivelany.
Fanaon’ilay ramatoa ihany koa ny tsy manajanona ny fanalahidin’ny fiara fa hoentiny manaraka azy izany rehefa miditra mamonjy ny fotoam-bavaka izy efa-mianaka. Tamin’io fotoana io anefa nivadika ilay rangahy mpamily. Rehefa nirava ny fivavahana dia tsy hitan’ilay renim-pianakaviana tao anatin’ilay fiara nijanona teo an-tokontany intsony izy. Rehefa nantsoiny tamin’ny finday dia mody nilaza ilay mpamily fa “voadonan’ny môtô ary naratra mafy ka tsy maintsy tsaboina eny amin’ny hôpitaly”. Taorian’io anefa dia tsy tratra antso intsony ity farany.
Voatery niantso mpamily hafa ilay ramatoa nanoloana izany, kanjo rehefa tonga tany an-tranony efa nivoha nidanadana ny varavaram-ben’ny trano. Tsy nisy tao intsony ireo fitaovana lafo vidy maro toy ny fahitalavitra, finday, solosaina finday, vola niaraka tamin’ireo antontan-taratasy sarobidy maro isan-karazany. Tsy vitan’izay anefa fa mbola lasan’ireo jiolahy ihany koa ny fiara tsy mataho-dalana iray niantsona tao anaty garazy izay noheverina fa nitondran’ireo olon-dratsy ny entana nitsoaka.
Karohina fatratra io mpamily tsy hita popoka io hatreto ary efa misy ny peta-drindrina isaky ny biraon’ny Polisy hikarohana azy.